Karatra sary inona no ilaiko? - Rindrambaiko Multi Multi Display
Inona ny karatra grika mila ahy?
Noforonina On Novambra 16, 2019
5. Fanontaniana matetika
Azonao atao ny mampiasa carte des grapie tianao ilainao, na izany aza dia tsy maintsy ilaina ny manohana ny isan'ny fampisehoana tadiavinao hampifandray. Easy Multi Display dia hanohana hatramin'ny 6 tsy manam-paharoa. *
* Jereo eto ambany raha mila fampahalalana fanampiny momba ny vahaolana ataontsika Enterprise ho an'ny fampisehoana mihoatra ny 6.
Avy amin'ny kisary 1 ka hatramin'ny 3
AMD Radeon levitra 550
Sarintany mihoatra ny 3
AMD Radeon levitra 580
Miaraka amin'ny Screenshot 6
Torohevitra momba ny karatra GRAPHICS
HDMI4096 x 2160 amin'ny 60 Hz
Asehoy ny Port7680 x 4320 amin'ny 60 Hz
DVI1920 x 1200 amin'ny 60 Hz
Mini Display Port2560 × 1600 amin'ny 60 Hz
Mitandrema mifidy ny karatrao miorina amin'ny vokatra azo apetraka amin'ny efijeryo, ireo izay manana DisplayPort na MiniDisplayPort dia tsy dia fahita firy ary lafo ny fampiasana mpanova (DisplayPort? HDMI).
Raha tsy misy VentilationSystem passive
Fampiasana herinaratra mihena
Karazan-dahatsoratra tokana iray (MiniDisplayPort)
Torohevitra ho antsika:
Ireto misy karatra sary malaza roa izay anoroanay hevitra. Karatra matihanina ireo, lafo eo amin'ny 300 $:
Tohanana hatramin'ny fampisehoana 4 (MiniDisplayPort)
Tsindrio Eto mankany amin'ny tranokala NVIDIA raha te hahalala bebe kokoa.
Tsindrio Eto mankany amin'ny tranokalan'ny AMD raha te hahalala bebe kokoa.
Miaraka amin'ny VentilationRafitra mavitrika
Ny fametrahana hery
Famoahana efijery marobe (HDMI-DVI-DisplayPort)
Sarobidy ny vola
Fanjifàna herinaratra avo lenta
Tabataba (+ -30db)
Manoro hevitra ity karatra kisary ity, mora vidy, mora ampiasaina ary mety amin'ny haino aman-jery, misy vidiny manodidina ny 200 $:
Tohanana hatramin'ny fisehoana 6
3 x HDMI (Efijery 3 miaraka amin'ny HDMI)
1 x DisplayPort (efijery 1 miaraka amin'ny DisplayPort
1 x DVI-D (Pikantsary Dual 2 miaraka amin'ny DVI)
Voazaha toetra ary ekena amin'ny fampiasana antsakany sy andavany 24/7, ny sandany tsara indrindra amin'ny vola.
Tsindrio Eto mankany amin'ny tranokala Gigabyte raha te hahalala bebe kokoa.
Teny manan-danja hividy ity vokatra ity: Gigabyte GeForce® GTX 1050 Windforce OC 4GB Ti
Mihoatra ny 6 efijery
Azonao atao ny mampiasa carte grika 2 any SLI miaraka amin'ny motherboard misy slot 2 PCI-e hitantanana efijery 12.
Ny sasany karatra grika avo lenta dia manolotra ny fitantanana ireo efijery 16, manolotra vahaolana avo lenta ho an'ny foibe komandà sy rindrin'ny efijery ihany koa izahay.
Tianay ny hanampy anao amin'ny tetikasananao, mifandraisa amin'ny iray amin'ireo ekipa mpanohana anay ho azo antoka fa mifantina fitaovana mety ianao ary hiresaka momba ny vahaolana rindrambaiko samihafa.
Ahoana no hividianana media nomerika sy hampihenana ny hosoka amin'ny doka
Famantarana nomerika ho fomba iray mahasarika hisarihana mpanjifa vaovao! Ahoana ny fampiasana ary aiza?
Famantarana nomerika: fironana vaovao amin'ny fifandraisana